■ Ukusebenza okuphezulu kwe-Heat Transfer Media.
■ Ukusebenza kahle okuphezulu, ukonga ugesi kanye nokuvikelwa kwemvelo
■ Ukuma okuhlanganisiwe, ukufakwa okulula
■ Amandla anamandla okulwa nokugqwala, impilo ende yokusebenza.
■ umlomo wamabhulokhi wamahhala oneLungelo lobunikazi
■ Okonga amandla nokonga imvelo - okunobungani
•Izinto zokwakha: Amaphaneli nekhoyili ayatholakala ku-Galvanized, SS 304, SS 316, SS 316L.
•Amaphaneli akhishwayo (kuyakhetheka): Ukufinyelela kalula kuzakhi zekhoyili nezangaphakathi zokuhlanza.
•Iphampu ejikelezayo: I-Siemens / WEG Motor, Ukugijima okuqinile, umsindo ophansi, Amandla amakhulu kepha amandla aphansi.
•I-Detiminable Drift Eliminator: I-PVC engonakalisi, idizayini ekhethekile
Pisisekelo sokusebenza: Inqubo eshisayo amanzi avela ku-Load / system / process angena ku- uhlelo lokwabiwa kwamanzi phezulu kombhoshongo wokupholisa lapho usatshalaliswa ngaphezu kokusebenza kahle kakhulu kugcwalisa noma imidiya yokudlulisa ukushisa. I-abalandeli be-axial, etholakala phezulu kweyunithi, yenza umoya kusuka ohlangothini lweyunithi ngaphezulu kokugcwaliswa. Ukugcwaliswa kuthuthukisa ukugeleza komoya, kwandisa indawo yokudlulisa ukushisa phakathi kwenqubo yoketshezi nomoya, futhi kuthuthukisa ukudluliswa kokushisa kwe-convection.
I-Inlet Louvers ivikela umbhoshongo ezinhlayiyaneni zangaphandle ezidonswa kule yunithi. Lapho inqubo eshisayo amanzi ihlangana nomoya obandayo, umoya uyashisa futhi ingxenye yenqubo yamanzi iyahwamuka okususa ukushisa emanzini asele. Amanzi abandayo awela emgodini ongezansi ngemuva kwalokho abuyele kusistimu / umthwalo. Okufudumele kugcwele umoya uphuma embhoshongweni usuka phezulu, ngaphambi kokuthi udlule emikhawulweni yokukhukhuleka, ebamba amaconsi amanzi asemoyeni ayibuyisele endishini engezansi.
•Isitshalo Sensimbi •I-Polyfilm
•Izimayini •I-power plant
Langaphambilini I-Evaporative Condenser - Ukuwela Kwesiphambano
Olandelayo: Isipholisi Somoya
Ama-Cooling Tower Systems
Ukwelashwa Kwamanzi Okupholisa
Umdwebo Wokupholisa Ongakapheli
Amanzi Okupholisa Umbhoshongo
Uhlelo lwe-AIO Refrigeration With Conde Evaporative ...
Izikebhe ze-Auxillary eziqandisayo